«Afrobasket women 2016» : lavon’i Angola i Madagasikara (NewsMada) | AEMW
«Afrobasket women 2016» : lavon’i Angola i Madagasikara (NewsMada)
Ratsy fiditra i Madagasikara teo amin’ny andro voalohany amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja basikety sokajy U18 na ny «Afrobasket women». Fihaonana tanterahina any Le Caire, Egypta. Resin’i Angola, tamin’ny isa 53 noho 32 mantsy ny Malagasy, teo amin’ny lalao voalohany ho an’ny sokajy «A», izay natao ny asabotsy lasa teo. Niady ny 10 mn roa voalohany satria nifandimbiasana ny nitarika ny isa teny amin’ny solaitrabe.
Lasan-dry zareo Angolezy tamin’ny isa 17 noho 11 ny tapa-potoana voalohany avy eo ny Malagasy indray nahazo izany, tamin’ny isa 10 noho 7. Tamin’ny isa 24 noho 21 no nentin’ny roa tonta niala sasatra. Anisan’ny nahatafiditra baolina be indrindra ho an’ny Malagasy, i Hajanirina izay nahafaty baolina 8.
Anisan’ny tena nampitatra ny isa ny lalao teo amin’ny tapa-potoana fahatelo. Nanjakan-dry zareo Angolezy tanteraka mantsy ny fihaonana. 21 noho 7 nisarahana tamin’izany. Mbola lasan’izy ireo ihany koa ny tapa-potoana farany izay niafara tamin’ny isa 8 noho 4. Hita nitambesatra teo amin’ireo mpilalao malagasy ny havizanana.
Marihina fa efa tafita hiatrika ny lalao ampahefa-dalana amin’ity “Afrobasket women 2016” ity i Madagasikara.
← Rugby – CAN U19 “1B” : Madagascar bat Ouganda 48 à 0 ! (Midi-Madagascar)
“Bushido 1” : ho avy haneho ny Kuk sool ny Me Kim (NewsMada) →